Ivotoerana R&D - Chengdu Hemeikaineng Medical Equipment Co., Ltd.
Ny orinasanay dia mampivoatra ny fanavaozana atosiky ny fanavaozana, manatsara hatrany ny rafitra fitantanana sy ny fanavaozana ny fanavaozana ara-tsiansa sy ara-teknolojia, manamafy ny fanavaozana ara-tsiansa sy ara-teknolojika, manafaingana ny fanavaozana ara-teknolojia indostrialy, ary mampiasa teknolojia avo lenta hanatsarana ny fifaninan'ny orinasa.
Ny orinasanay dia manana ekipa R&D 30 olona, ​​ao anatin'izany ny teknisianina R&D doctorat 9 ary ireo mpiasan'ny R&D 21 nahazo diplaoma. Mampivelatra teknolojia sy vokatra miaraka amin'ireo mpanamboatra mpiara-miasa koa izahay, mandray anjara amin'ny teknolojia sy ny famolavolana vokatra ary manavao arakaraka ny filan'ny tsena. Ny vokatra dia azo namboarina mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny fitaovana, ny famaritana, ny haitao, ny pac kaging, sns.
Mikasa ny hanampy talenta vaovao amin'ny ekipa R&D ny orinasanay mandritra ny 5 taona ho avy. Vonona ny hanitatra ireo olona 30 ka hatramin'ny 60 misy izahay; vonona ny hahatsapa ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny teknolojia fitaovana fitsaboana, ary amin'ny farany manatsara ny famokarana fahombiazan'ny vokatra.